साइकलसँग ठोक्किएर कार कच्याक कुचुक भएपछि | Makalukhabar.com
साइकलसँग ठोक्किएर कार कच्याक कुचुक भएपछि
पुस २३, काठमाडौँ । चीनको सेन्जेन सहरमा साइकलसँग ठोक्किएर कार कच्याक कुचुक भएको छ । कारसँग ठोक्किएर साइकल कच्याक कुचुक हुनु पनि नौलो होइन । जब साइकलसंग कार ठोक्किदा कार कच्याक कुचुक बन्यो तब यो कुरा आश्चर्य बन्दो रहेछ ।
रोचक त के भने साइकल र कार आपसमा ठोक्किँदा साइकलमा कुनै क्षति पुगेन तर कारको अगाडिको बनोट पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त बन्यो । त्यो तस्वीर सोसल मिडियामा अहिले भाइरल बनेको छ ।
उक्त घटनामा कारलाई कुच्याइदिने साइकलको धेरैले प्रसंसा पाइरहेको छ । त्यस्तो बलियो साइकलको बारमा जान्नका लागि मानिसहरु उत्सुक नहुने कुरै भएन । घटनाको भिडियो बाहिर आएसँगै मानिसहरुले कार कम्पनीको मजाक उडान सुरु गरे ।
कतिपयले त्यो फोटो तथा भिडियो नक्कली भएको बताएपनि पुलिसले त्यो वास्तविक घटना भएको पुष्टि गरेको छ ।पिपुल्स डेली चाइनाले समेत यो तस्वीर सहितको समाचार छापेको छ । दुर्घटनामा साइकलमा कुनै क्षति नभएपनि चालक सामान्य घाइते भएका छन् । उक्त कारको अगाडिको भाग नराम्रोसँग क्षतिग्रस्त भएपनि कारका यात्रु तथा चालक सुरक्षित छन् । एजेन्सी
सारा खानका यी ६ तस्विर, सामाजिक सञ्जालमा बन्यो ट्रोल
यस कारण गरिन्छ चीनमा मृत महिलासँग बिवाह
चैत ८ । विवाहको सन्दर्भमा विश्वमा फरक फरक चलन र परम्परा छ । त्यसमध्येको सबैभन्दा अनौठो विवाहको परम्परा चीनमा छ । चीनको एउटा गाउ... जारी राख्नुहोस...
जापानमा धुमधामका साथ यसरी मनाइयो लिंग पर्व (फोटो फिचर)
एजेन्सी । जापानमा एउटा विशेष पर्व मनाउन हजारौँ मानिसहरु भेला भए । त्यो पर्व यस अर्थमा विशेष छ कि पर्व पूर्णरुपमा पुरुष यौनांगमय भयो । यो लिंग पर्वलाई जापानमा होनेन साइ भनिन्छ । होनेन साई पर्वमा लिंग आकारका बहुरंगी आकृतिहरु यत्रतत्र राखिएका थिए ।... जारी राख्नुहोस...
अचम्मकाे परेवा जसलाई १५ करोडमा बेचियो
चैत ७ । बेल्जियममा एउटा परेवा १.२५ मिलियन यूरो अर्थात् १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा लिलामी भएको छ । जारी राख्नुहोस...
तपाईंलाई थाहा छ, मन्दिरमा किन राखिन्छ घन्टी ?
पैसा गन्न नसकेपछि विवाह क्यान्सिल !
भारतको बिहारस्थित एक दुलहीले दुलाहा अशिक्षित भएको भन्दै विवाह गर्न अस्वीकार गरेकी छिन् । जारी राख्नुहोस...
मृत घाेषित भएकी महिलाकाे पोष्टमार्टम गर्न लाग्दा घट्याे अनाैठाे घटना (भिडियाे सहित)
चैत ४ । कोलम्बीयाको केली शहरमा एक महिलालाई दिनदहडै गोली हानिएको थियो । दिनदहडै सडकमा महिलामाथि गोली प्रहार भएपछि स्थानीयले घटना... जारी राख्नुहोस...
यी हुन् प्रेमीलाई छुरा हानेपछी अँगाले हाल्दै नमर्न बिन्ती गर्ने युवती
चैत १ । एक युवतीले प्रेमीलाई पेटमा छुरा रोपेपछि अँगालो हाल्दै नमर्नका लागि अनुनय बिन्ती गरिन् । मिरर डट को डट यूकेका अनुसार मेक्स... जारी राख्नुहोस...
ह्वेलको मुखभित्र पसेर कसरी जीवितै बाहिर निस्किए यी व्यक्ति ? क्यामेरामा कैद भयाे यस्ताे दृश्य
फागुन २८, पोर्ट एलिजाबेथ । साहसिक काम गर्नेहरुले बेलाबेलामा निकै खतरनाक अवस्थाको सामना गर्नुपर... जारी राख्नुहोस...
फागुन २६, काठमाडौँ । विदेश भ्रमण गर्न चाहने जो कोहीलाई भिसा पाउन त्यति सजिलो छैन् । रोजगारकै लागि विदेश जाने तयारी गरिरहे... जारी राख्नुहोस...
यी सुन्दर युवतीलाई किन घरबाट बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध गरियाे ?
फागुन २४, मस्को । सबैजसो युवतीलाई सुन्दर देखिने चाहना हुन्छ । तर, केही युवती यस्ता हुन्छ... जारी राख्नुहोस...